SomaliTalk.com » 2011 » December » 07
Home » Archive Maalinta December 7th, 2011
Gabay ku Saabsan Duulaanka Kenya Soomaaliya ku soo Gashay iyo Cabdulaahi Soomaali
Gabayga Magiciisu waa (Aar Gedooday) Geesi laga baqaayo oo Gambasho aqoonin, Gawaan iyo Nin seexa yaqaan geeda dhinacooda, Gaardiska Ninkaa u socdee Gaala ka cabaadshay Adigaa u soo Guluf tegee Goor Xun ha Margaagin. Waxay ila tahay in aanu mar waliba diyaar u ahaano in aanu Dalkeena, Diinteena iyo dadkeena Cadawga ka difaacano, Waxaa is Cadeysay oo Cadawga duulaanka inagu ah iminka safka hor uga biirtay...
Xildhibaan Cali Zeko “Kama soo hor jeedno Road Map-ka balse waxaan ka soo Hor jeednaa Road Map-ka ay Wataan Mahiga iyo Sharif Xasan .
Iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay si aad ah u soo badanayeen Eedeymaha ka dhanka ah Erg eyga qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Dr Mahiigga ayaa hadana waxaa mar kale ka hadlay Xildhibaan Cali maxamuud faarax Cali Seeko. Xildhibaan Seeko oo la hadlayay qaar ka mid ah war baahinta Gudaha ayaa Mahiiga ku sheegey inuu caqabad ku yahay Nabadda iyo Horumarka Soomaaliya isagoona ku tilmaamay inuu...
Shiikh Xasan Turki oo iska Fogeeyey in Ururka Al-Shabaab uu ka Dambeeyay Dilkii Dhawaan Loogu Gaystay Shiikh Axmed Xaaji Cabdiraxmaan.
Dhawaan ayaa waraysi uu bixiyay Madaxweynaha maamulka PuntLand waxaa uu ku sheegay in dilkii loo gaystey Shiikh Axmed Xaaji Cabdiraxamaan oo ka mid ahaa Mashaa’iikhda waa weyn ee dalka sida aadka ah looga yaqaano ayaa arrintaa si dadban ugu eedeynayay Xarakada Shabaab oo xiliga uu sheegayo shir ku soo gaba gabaysey magaalada baydhabo ee Gobolka Bay. Shiikh Xasan Turki oo ka mid ah saraakiisha...
K.S R.W. oo maanta shir guddoomiyay shir looga hadlay sugida Amniga Muqdisho
Kusimaha Ra’iisul Wasaaraha ahna Wasaiirka Gaashaandhigga Mudane Xuseen Carab Ciise ayaa maanta shir guddoomiyay kulan looga hadlayay arrimaha ammaanka caasimadda iyo ka hortaga falalka qaraxyada ah ee ay todobaadyadii ugu dambeeyey kooxaha nabadiidku la beegsanayeen goobaha shacabka iyo saldhigyada Dowladda, waxaana kulankan ka soo qeybgalay Wasaraddaha ku sahqada leh Amniga iyo saraakiisha amniga...